Natao tao amin’ny Holafy fahafito (EP7) Betongolo nandritra ny dimy volana ny fiofanana. Tonga nanotrona sy nanome voninahitra izany ny Jeneraly Rabehajasoa Andrianarivo, mpandrindra ankapobeny ny asa stratejika eo anivon’ny sekreteram-panjakana miadidy ny ZP, nisolotena an’Andriamatoa SEG sy ny lefitra voalohany ny komandin’ny zandarimariam-pirenena nisolotena ny COMGN. Teo ihany koa ireo manamboninahitra jeneraly am-perinasa sy ireo efa nisotro ronono, manamboninahitra ambony, manamboninahitra, manamboninahitra lefitra ary manamboninahitra sivily. Marihina fa 241 no isan’izy ireo nisoratra taorian’ny antso ka nihena ho 133 ny tafajanona rehefa vita ny fizaham-pahasalamana ary tamin’ny farany dia izy 115 lahy no voatazona noho ny antony maro. Fantatra ihany koa fa manana fahaizana sy fahamatorana manokana ara-miaramila ireto andiany ireto raha ampitahaina amin’ny zokiny teo aloha satria 53 amin’izy ireo no manana diplaoma Bacc, 03 manana licence, 02 infirmier, 02 manana Bacc+2, 14 informaticien, 02 mécanicien auto ary 03 électricien. Nitsodrano manokana ireo kaomandin’ny hery vonjy taitran’ny zandarimariam-pirenena. Afaka hanampy amin’ny asa fiadiana amin’ny tsy fandriampahalemana ankoatra ny fanompoan-tanindrazana ireo andiany ireo.